UMichael Kiwanuka Uyangqubana Nokuba nguMntu oMnyama kwiLizwe eliMhlophe - Itv
Eyona Itv Ngaphaya komphefumlo: uMichael Kiwanuka Uyashukuma ngokuba nguMntu oMnyama kwiLizwe eliMhlophe
Ngaphaya komphefumlo: uMichael Kiwanuka Uyashukuma ngokuba nguMntu oMnyama kwiLizwe eliMhlophe
UMichael Kiwanuka.Imithombo yeendaba enkulu
Eyona app ilungileyo yokuqhagamshela
Amagcisa ayabathanda abaphulaphuli. Kodwa nini UMichael Kiwanuka ujonge eyakhe, enye into imenza buhlungu. Kunqabile ukuba kufike abantu abamnyama kule miboniso, yatsho le nkwenkwezi, imvelaphi yase-Uganda. Ukuba bayayenza, ingafana nepesenti ezimbini. Kwenzeka njani ukuba ingaxubeki? Kwenzeka njani ukuba ibe luhlobo olunye kuphela lomntu oza kwiindidi ezithile zeigig?
Umbuzo onzulu-omnye wee-Kiwanuka ezininzi ujongana ngqo, okanye ngokungacacanga, kwi-albhamu yakhe entsha, Thanda ukonyanya .
Ingqokelela, ngaphandle kwesango u-1 otyumza inkwenkwezi yemveli yase-U.K, uboya ngqo kwimicimbi yobuhlanga kwindawo yakhe yokuqala, Umntu oMnyama kwiLizwe eliMhlophe. U-Kiwanuka uphinda ibinzana lesihloko ngaphezulu kwamaxesha angama-40 ngexesha lengoma yemizuzu emine. Kodwa ithoni yakhe ayisiyongxabano okanye ingqumbo. Iyakhanyisa, iphakamisa ukuba umntu othile ulwa ngokunyanisekileyo nehlabathi njengoko linjalo. Uhlobo lwezopolitiko lwengoma luthetha ngokunyuka okukhulu kwiingoma ezihambelana noluntu emva kwexesha, ezibonakala kwii-albhamu zamva nje nguKendrick Lamar, Beyonce , Alicia Keys kunye I-Tribe ebizwa ngokuba yi-Quest .
Indoda eMnyama ayisiyongxelo nje kuphela kumandla ohlanga, kodwa kwimvelaphi ethile kaKiwanuka. Abazali beemvumi bafuduka eUganda baya eU.K kwii-70s, ngexesha lolawulo lobuzwilakhe luka-Idi Amin. Ngokwahluke mpela e-UK yexesha le-Brexit, ilizwe ngelo xesha labamkela abafuduki. Nangona kunjalo, uKiwanuka waziva engahlali yedwa.
Ukukhula eMantla eLondon, kwindawo emhlophe ekumgangatho ophakathi, yayiyeyona kuphela sintsapho yokwenyani yamaAfrika apho, utshilo. Ibiyinto entle yokukhuliswa kodwa besingafani. Kwangelo xesha, xa ndandiye eUganda kwaye ndihleli kunye nosapho lwam, sasibonwa njengabafana abangamaNgesi. Banelizwi elithetha umntu wasemzini, okanye umntu omhlophe. Yiloo nto abasibizele yona.
Ingqondo yokuphila phakathi kwehlabathi eyandisiweyo kuhlobo lomculo u-Kiwanuka wakhula enothando, kunye nohlobo awayeze kuludlala.
Ukuqala kwakhe kuka-2012, Ikhaya kwakhona , iingcikivo ezichaseneyo malunga nohlobo lomculo ileyibhile ephambili eya kuthengisa inkwenkwezi emnyama. Icinezele uphawu olupholileyo lomphefumlo womntu, ophawulwe ngemveliso esecaleni neyimithunzi eqaqambisa ukukhala kwemvumi. Ukuthelekisa kwangoko kuye kwenyuka UMthetho oYilwayo uyabuna , kunye noTerry Callier, imvumi engaziwayo kangako, yase-Afrika-yaseMelika eyenze uphawu olunomphefumlo wabantu kwi-60s nakwi-70s. Ukuqala kuka-Kiwanuka kwaba yinto ephezulu ye-5 e-UK, nakwamanye amazwe aseYurophu. Imzuzele imbeko eyoneleyo yaseStateide ukukhuthaza uKanye West ukuba amcele ukuba asebenzisane nesitudiyo ngexesha NguYesu iiseshoni. (Unxibelelwano lwabo olufutshane aluzange luvelise ziqhamo).
Inkolelo kaWithers yangqina ikrele elintlangothi-mbini likaKiwanuka. Ndingumlandeli omkhulu, utshilo. Into yokuba wayengumntu omnyama edlala ngokwasemphefumlweni, iingoma zomculo, iingoma zomphefumlo zaba nefuthe elikhulu kum lokuba ndiqhubeke nokwenza uhlobo lomculo endizama ukuwenza. Kwangelo xesha, kulula kakhulu ukuthelekisa. Indenze ukuba ndifune ukuzuza isandi sam ukuya kuthi xhaxhe apho abantu bendiva nje hayi omnye umntu.
Mva nje, lonto ibisenzeka. Entsha Thanda ukonyanya ayivakali ngathi Ikhaya kwakhona . Ibandakanya, inqabile kwaye inesibindi ngokwaneleyo ukucebisa uhlobo olutsha olutsha-iSpaghetti Umphefumlo waseNtshona.
Ngokutshayelwa kwe-cinema, umculo ujikeleza ngokudibanisa iokhestra, iikwayara zabasetyhini ezisebenzayo kunye neegitare ezi-psychedelically-fuzzed, konke kubhekisa kwingoma ye-Ennio Morricone yee-60s kunye nee-70s. U-Kiwanuka udibanisa elo lifa kunye ne-70s yomphefumlo oqhubela phambili. Ukumnceda afezekise imali eseleyo, waqesha umvelisi uBrian Dangermouse Burton. Umvelisi uhlala etsala isandi sikaMorricone, ngokucacileyo kwi-albhamu yakhe ye-2010 Iintsimbi ezaphukileyo .
Ukusebenzisana kukaBurton noKiwanuka kwaqala kwangoko ku-2015 xa umlimi wathumela i-imeyile kulo mculi ukuze abone ukuba akukho naziphi na iiprojekthi ezizayo. U-Kiwanuka wayebambekile kwimizamo yakhe yangaphambili yokulandela amanqaku akhe anyuliweyo. Kwiminyaka eyandayo ukusukela ekukhululweni kwakhe okokuqala, waxhuma ngethuba lokutsiba izinto kunye nomvelisi owaziwayo e-LA Baqala ukusebenza nzima ukuzonwabisa, utshilo uKiwanuka. Kungekudala iinzame zabo zivelise ukuwa kwengoma, isandi sayo sathembisa ngokwaneleyo ukuba sinokucebisa nge-albhamu yonke. UBurton ukhuthaze isandi esitsha esingqindilili, esityebile kwimfihlelo kunye nokunqwenela.
Umkhondo wokuqala ubhengeza utshintsho kwangoko. Intliziyo ebandayo encinci iyaqengqeleka ngaphezulu kwemizuzu eli-10 kwaye ayizisi ilizwi likaKiwanuka elibuhlungu de kube phantse isiqingatha sendlela. Iphantse yalinga, icela umngeni kumphulaphuli ukuba aqhubele phambili. Ngesizathu esithile, bendicinga ukuba ukuya kude kuzakufumana umdla wabantu abaninzi, utshilo umculi. Nokuba iphakamise amashiya, okanye yenza abantu bacinge ukuba ayiqhelekanga, bendicinga ukuba iya kwenza abantu abaninzi bamamele.
Inkqubo yakhe yayinomzekelo. Emuva ngo-1969, u-Isaac Hayes wazisa igama lakhe ngokunzulu kwinguqulelo yakhe ka-Burt Bacharach's Walk On By, efumaneka kwi-albhamu yakhe yakudala Umphefumlo oshushu . Idiski kaHayes yanceda ukutyhala iR & B kwindawo yomculo oyintloko. Umphefumlo oshushu kwaye izinto zeFunkadelic zibeka ilitye elinzima, eliqhutywa yikatala le'60s emphefumlweni, utshilo uKiwanuka. Kwakungekho ngexesha le Motown. Kum, kwakupholile oko kuba ndiyawuthanda umculo we rock kunye nomphefumlo ngaxeshanye.
Ukuboleka umahluko omkhulu kwilitye likaKiwanuka, uBurton waphosa inkungu elizungeze ilizwi lakhe, isenza ngathi kuvakala ngathi kungena kwelinye ilizwe. Oko kwavela kwiirekhodi ezindala zeblues ezifana neWowlin 'iWolf okanye iLanga House, imvumi ithe. Iifilimu zabo ziya kuqhekeka kwezi rekhodi. Ndiyayithanda indlela oziva ngayo.
Ukufumana ireferensi enzulu yembali, uMntu oMnyama utsala kwisandi esifana neengoma ezindala zasejele, njengoko zifakwe ngu-Alan Lomax orekhodayo ebaleni. Kuyavela, ayisosampulu kodwa sisandi sikaKiwanuka eqhwaba izandla kunye nengoma yakhe yezwi.
Kwicala le rock, u-Kiwanuka uzobe kwi-Pink Floyd-ngakumbi ukuthembeka kwesandi kunye ne-bluesy ping yesigingci sakhe sombane. UDavid Gilmour yeyona mpembelelo icacileyo kum, utshilo. Ndihlala ndikuthanda ukudlala kwakhe. Kwakhona, uEddie Hazel waseFunkadelic, owayekhe waziva uHendrix. Ukudlala isiginkci sombane yindawo enkulu kum. Kwakukho ukhuthazo olungakumbi lokuba ndiyilandele ngale albhamu.
Ukujongana ngqo nohlanga kwathatha ukuzithemba ngakumbi. Kuqala, u-Kiwanuka wathi wayezazisile ngokukhupha ingoma enesihloko esithi Umntu Omnyama KwiLizwe Elimhlophe. Bendingafuni abantu bazive ngathi ndinomsindo okanye ndichasene nabantu abamhlophe, utshilo.
Kodwa abo bakuvayo basabela ngoko nangoko. Phambi kokuba icwecwe liphume, umlawuli uBaz Luhrmann weva ikopi kwaye waqhagamshelana no-Kiwanuka malunga nokubandakanya ingoma Yehla , uthotho lwakhe malunga nenkcubeko yehip-hop kwiBronx etshisiweyo ye''70s.
U-Baz undichazile iyelenqe kwaye kwavutha ingqondo yam ngenxa yokuba ndithe phithi zii-70s kunye nomculo waseMelika, utshilo uKiwanuka. Kwakhona, ndandingumntu othanda ifilimu yeBaz. Ubuzile, ‘Ngaba uyakhathazeka xa sithatha iinkululeko ezimbalwa ngengoma? Singathanda ukuba noNas kuyo. ’Oko kwavusa ingqondo yam nangakumbi. Bathumele imiboniso ngohlobo lwengoma noNas kwaye ndiyayithanda.
Izinto ezininzi eluntwini zitshintshile ukusukela kwiintsuku eziboniswe Yehla . Nangona kunjalo, eminye imiba ephambili yobuhlanga ihlala injalo. Ulwahlulo lwenkcubeko ekudala lukhuthaze ukwahlula phakathi kweentlanga alukatshintshi kakhulu. Sisakuthanda ukuhlala nabantu bethu, inkwenkwezi yatsho. Asidibani ngokwenene.
Ngokuhambelana, uninzi lwabaphulaphuli abamnyama abasaziva bekhululekile ukuya kwimiboniso ngamagcisa acingelwa ukuba adlala umculo onomtsalane kwabamhlophe, kwaye kungenjalo. Ngelixa uKiwanuka esithi akanangxaki nokuba abaphulaphuli bakhe ikakhulu ngabamhlophe, wongeze, kuya kuba kuhle ukubona ukusasazeka.
Kwangelo xesha, uqaphele ukuba iingoma ezintsha ezinje ngoMntu oMnyama kwiLizwe eliMhlophe ekugqibeleni, malunga nokwahluka kunye nokuma ngaphandle. I-albhamu imalunga nokuqhekeka ukuze ndibenguye, nokuba kwenzeka ntoni na kwilizwe langaphandle.
Okumangalisayo kukuba, uKiwanuka ukholelwa ukuba indlela aqhele ngayo yokuzahlula yamnceda ukuba ayenze njani loo nto. Ekugqibeleni, andazi ukuba yinto embi na ukwahlukaniswa, utshilo. Abantu bathi kunjalo, kodwa yenza wena ukuba ungubani.
UMichael Kiwanuka udlala iWebster Hall ngoLwesithathu, nge-30 kaNovemba
I-Hip Hop Hooray: I-Naughty ngokweNdalo ibuyela kwindawo ebonakalayo
UGabby Karan de Felice Ufuna ukuba yiNdawo yokuGcina iiHamptons
ICawa yamaKatolika kunye neParade yePolitiki yaseNew Jersey
Ubuhlanga, iMisogyny kunye nezoyikiso zokuFa: I-Star Wars Fans yajikela njani eMnyameni
Ualec baldwin kwixilongo
mako (ilivo lekorra)
Umfazi olungileyo wokugqibela uphinda
Amasango ebill covid 19 isitofu sokugonya
ndingazenzela eyam imvelaphi yokujonga
iza nini izinto zasemzini 4